ဗာဂိုး ကြယ်စုတန်း၊ ကိုမာ ဘီရင်နီဆပ်စ်
Virgo Cluster မှ သိသာထင်ရှားသော ဂယ်လက်ဆီများပြင်ဆင်
↑ Durrell, Patrick R. (2010). "Searching for Intracluster Globular Clusters in the Virgo Cluster". Bibcode: 2010AAS...21547814. Archived 30 April 2019 at the Wayback Machine.
↑ Galaxy On Line Database Milano Network (GOLDMine)။3June 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2012-08-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Virgo_Cluster&oldid=707529" မှ ရယူရန်
၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။